kwan dai thet thi: ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်နန့် မျိုးဆက်သစ်သျှေတိ ကံကောင်းပုံ
ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်နန့် မျိုးဆက်သစ်သျှေတိ ကံကောင်းပုံ
ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းတိကြားမာ လက်ဟိစစ်အုပ်စုကို၊ အထူးသဖြင့် သန်းရွှေကို ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနီရေဆိုဘနာ ပြောဆိုနီဂတ်သံတိကို ရက်ပြတ်ကြားနီရရေ။ သန်းရွှေကလေ့ မင်းရူး၊ ဗေဒင်ရူး၊ နတ်ကုတ်မရူးဆိုခါ ဟုတ်ချင်လေ့ ဟုတ်ဖို့။ တချို့ကလေ့ ယင်းချင့်ကို ကဂေါင်းစိုးရိမ်နီဂတ်တေ။
အကျွန်ကတော့ ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တစိသျှေလေ့မကြောက်တောင်မက ထူထောင်ဖို့လူကို အားရ၀မ်းသာကြိုဆိုရေ။ ဇာဖြစ်လို့လဲဆိုဂေ အကျွန်ရို့အချေဘ၀ ကျောင်းတက်ခခါ အောက်ချီးဘုရင်တိ၊ စစ်သူကြီးတိနာမေနန့် ကျောင်းမာ အလှည့်ကျသန့်ယှင်းရေးလုပ်ကတ်ရရေ။ အလောင်းဘုရား၊ ဘုရင့်နောင်၊ ဗန္ဓုလ၊ ကျန်စစ်သား ဆိုဘနာ။ ကျောင်းက တပါတ်မာ (၅)ရက်ဖွင့်ရေဆိုခါ တလင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓူး၊ ကြာသားပတီးဆိုကေ (၄)ကောင်ကုန်ယာ။ သောက်ကြာနိန့်အတွက် မကျန်ယာ။ သောက်ကြာနိန့်တရက်ကို ကျောင်းသားအားလုံးစုဘနာ လုပ်ကတ်ရရေ။
အဂု ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်လာဖို့ဆိုဂေ (၅)ကောင်ဖြစ်လာဖို့။ ယင်းပိုင်ဆိုကေ (၅)ရက် ကွတ်တိ။ သန်းရွှေဖြစ်ဖို့လား၊ မောင်အေးဖြစ်ဖို့လား၊ သိန်းစိန်ဖြစ်ဖို့လား။ ဖြစ်ချင်အကောင်ဖြစ်။ သောက်ကြာနိန့် သန့်ယှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလို့ရရေ။ အနာဂါတ်မာ လာဖို့ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားချေတိ ကံကောင်းရေလို့ ပြောရဖို့….သောက်ကြာနိန့်အတွက် ပူစရာမလိုယာ။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 06:56
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကလွဲလို့တခြားမဟိ
Death in struggle for independence is more honourable and nobler than hundred years alives inacolonial life.
Prince Shwe Vann
Let's try to hoist this flag in Arakan!
ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်နန့် မျိုးဆက်သစ်သျှေတိ ကံကောင...